Jikelele kunye China Micromotor Industry Report, 2016-2020 - China Shandong Better Motor
Ungubani na thina
Oomasifundisane & Facilities
Motors Kuba Woodworker Machine & Ngokuba Gardening Tool
Motors Ukuze Machine ashukimisayo
Motors Ukuze Applications Automotive
Motors Kuba Ezinye Machine
Jikelele kunye China Micromotor Industry Report, 2016-2020
Global imveliso micromotor wema kwiiyunithi 17.5 billion ngo-2015, ngonyaka-on-kunyaka ukunyuka ye 4.8%. Ngenxa amaphulo kwanokuphucula shishino kunye nezixhobo, imveliso kulindeleke ukuba avuke kwiiyunithi 18.4 billion ngo-2016 yaye sisondela iiyunithi 23 billion ngo-2020.
China, umenzi inkulu ehlabathini ngayo micromotors, zavelisa iiyunithi 12.4 billion ngo-2015, ukuya 6.0% ukusuka kunyaka ophelileyo, ne-Accounting ukuze 70,9% yetotali jikelele. output micromotor yelizwe kuqikelelwa ukuba sisondele iiyunithi 17 billion ngo-2020 ukuya kwindawo CAGR ngomyinge we-7.0% ngo-2016-2020.
abenzi Keymicromotor e China includeJohnson Electric, Welling Holding Limited, Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd., kunye Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, njengoko micromotor umenzi inkulu China, ifumana Ingeniso yonyaka overUSD1 billion, kunye isabelo kwiimalike zehlabathi ka-4.3% ngo-2015.
E China, micromotor ifumana isicelo balo ncakasana kwiinkalo zemveli, ezifana iimveliso odiyo, izixhobo zombane zasekhaya, nabahamba, ayeba onomlinganiselo odityanisiweyo ka-52,4% ngo-2015 Njengoko kwiimarike isicelo zemveli kancane ifumile, abaqhubi eziphambili ukukhula micromotor iza asakhulayo amacandelo afana imoto entsha amandla, isixhobo wearable, irobhothi, UAV, kunye nekhaya smart.
Industry Information: okuzo China ngayo VCM for ezinjengeetheminali ezihambahambayo 542kk ngo-2015, ukuya 12.9% ngonyaka nonyaka, abahlala 45,9% yetotali ehlabathini, ikakhulu eqhutywa Smartphones kanye-PC tablet. Nge Ukwanda ngcembe neemarike ukuba umthengi electronic zemveli ezifana smart kunye PC tablet, izixhobo wearable iya kuba kwindawo entsha yokukhula, ngakumbi ukonyuswa kwemfuno micromotor. Imarike Chinese isixhobo wearable kuqikelelwa ukuba ukwandisa kwi izinga lokukhula wonyaka ongaphezu kwama-25%.
Automobile: Ngo-2015, imfuno China ngenxa micromotor izithuthi yaba iiyunithi 1.02 billion (24.9% yetotali zehlabathi, kulindeleke ukuba avuke kwiiyunithi 1,62 billion ngo-2020), ngaphantsi kwe-3% evela isithuthi esitsha eneji. intengiso New isithuthi amandla ukukhula ngesantya compound ngonyaka ka-152,1% ngo-2011-2015 e China kunye, ngenkxaso-nkqubo yesizwe kunye zasekuhlaleni, uya kulifeza isantya sokukhula elinamandla esi sibini elandelayo iminyaka. Kuqikelelwa ukuba lentengiso micromotors imoto entsha eneji uya kukugcina ukuphuma kunyuka nge-40% ngonyaka ngexesha 2016-2020 kunye nemfuno kunene million 150 ngo-2020.
Robot: 248.000 iirobhothi mveliso kunye nezigidi 6,41 iirobhothi inkonzo zathengiswa jikelele ngo-2015, ukuya 8.3% ne-35.7% ukusuka kunyaka ongaphambili, ngokulandelelana, kunye nokudala ifuna malunga 66.6 yezigidi micromotors (uqikelelo kweeyunithi ngaphezu kwezigidi 300 ngo-2020) . Ngo-2015, China accounted for 22.9% yentengiso robot industrial ehlabathini kwaye% about 5.0 kuphela yentengiso robot kweenkonzo, ebonisa indawo enkulu ekukhuleni.
Consumer-grade UAV: ​​Ngo-2015, intengiso zehlabathi umsebenzisi-grade UAV ngaphaya iiyunithi 200,000, xa kuthelekiswa ne-kuphela ngaphantsi kwama-20,000 kweeyunithi e China. Njengoko low-ephakame elibala ebegqwese kuvulwa, imarike UAV yaseTshayina uya kuzisa kwixesha lokukhula ngokukhawuleza ngesantya kwama-50%.
Ukongeza, iimarike ezintsha ze 3D yoshicilelo, ikhaya smart, izixhobo zonyango, kunye ilabhoratri esizisebenzelayo zixhaswa nkqubo iza ukhaba kubuywa ephakamileyo, ngakumbi uqhuba imfuneko micromotors.
Jikelele kunye China Micromotor Industry Report, 2016-2020 ugxininisa zilandelayo:
kushishino Global micromotor (imbali uphuhliso, yesayizi yemakethi, isakhiwo kwimarike, landscape wokhuphiswano, njl);
Kushishino Micromotor e China (status quo, yesayizi yemakethi, isakhiwo kwimarike, landscape kukhuphiswano, ukungena & kumazwe angaphandle, njl);
Amashishini Main emantla (izinto owahluke ngokwemvelo, ukuzala, njalo-njalo), ebandakanya yesayizi yemakethi, isakhiwo kwimarike, uphuhliso, njl .;
Amashishini nomfula (ulwazi, imoto, sixhobo nendlu, irobhothi, UAV, ushicilelo 3D, ikhaya smart, izixhobo zonyango, njl), ebandakanya isicelo kunye nemarike;
11 Global kunye nabenzi micromotor Chinese 10 (umsebenzi, ishishini micromotor, uphuhliso e China, njalo njalo).
ixesha Post: Feb-27-2018
Iselula: +86 13564093630
Ngcono Ufike elinye Higher yoNyaka Outp ...
2016 ngomnye unyaka sivuno Better Motor, ngenxa yokuba 'inkxaso kunye nabasebenzi Better zabaxhasi yokusebenza nzima. Siqala ukukhula inkqubela kunyaka ngamnye. isiphumo yonyaka ngo 2016 million 2.9 iiseti, 450.000 iiseti inc ...
Injineli Li Dongwei ukusuka Ohio State needyunive ...
NgoJuni 8, Electric Engineering and yokuZenzekelayo Engineer Li Dongwei ukusuka Ohio State University USA watyelela Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, umphandi postdoctoral ukusuka ilabhoratri yesayensi zombane eOhio ...
Ikomiti yeprojekthi ye ulwazi lel ...
NgoJuni 26, iqela leprojekthi ye projekthi iinkqubo zolwazi zobunjineli Better Motor yasekwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd olawula yokuyila nokuqhuba le projekthi. Kuyinto Pla ...
Portescap wazisa 16DCT motor entsha torque layo eliphezulu DCT uluhlu Athlonix Motors. I 16DCT motor unako ukuhlangula gqolo torque ukuya ku 5.24 mNm kwindawo ubude 26mm kuphela. I 16DCT isebenzisa enamandla Neodymium ma ...
Njani umsebenzi cleaner abacoci?
Isicoci cleaner abathobekileyo yenye zombane iluncedo wokucoca ekhayeni asetyenziswa namhlanje. nokuma kwawo elula kodwa onamandla ubhangiswa kokuba ukucoca eluthulini kunye nezinye amasuntswana esincinci imiphezulu ngesandla, kwaye tu ...